Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » bọọdụ Charcuterie ọhụrụ na-esote: Nweta banana gị!
Flavour & The Menu's kwa afọ Top 10 Trends na-arụtụ aka na "ịmepụta ọchịchị onye kwuo uche nke ihe ọhụrụ," ebe ụfọdụ usoro ụlọ oriri na ọṅụṅụ sitere ugbu a sitere na omume ndị ahịa.
Mpempe akwụkwọ charcuterie na-atụgharị, ihe ọṅụṅụ na-esi ísì ụtọ na-emepụta banana na dessert, na spins ọhụrụ na oge ochie nkasi obi Mexico so na 10 ndị isi na-eme ihe na-eme ka usoro nchịkọta nhọrọ maka 2022, na-ebu amụma Flavor & The Menu Magazine na mbipụta Top 10 Trends, online na getflavor.com .
Kwa afọ, ndị editọ Flavour & The Menu Cathy Nash Holley na Katie Ayoub na-achịkọta usoro nke ga-amasị ndị na-azụ ahịa taa ma nye ohere uto maka ụlọ ọrụ ụlọ nri. Ha na-egosipụta usoro ekpomeekpo na-apụta, na-enye nghọta nke na-eme ka ìhè dị na "ihe kpatara ya" n'azụ nke ọ bụla n'ime 10. Okwu ngosi a na-eje ozi dị ka ụzọ ụzọ maka ihe ọhụrụ, na-enye ndị na-emepụta menu ihe echiche maka mmejuputa n'ime ahịa.
Cathy Nash Holley, Flavor & The Menu's Publisher/Editor-in-Chief na-ekwu, "Nchịkọta nke Top 10 Trends nke afọ a na-egosi mgbanwe, nke ndị na-eto eto na-anọ n'oche ọkwọ ụgbọ ala ma a bịa n'ihe gbasara nri na ihe ọṅụṅụ. "Nnyocha anyị egosila na mgbasa ozi ọha na eze eruola n'ókè nke omume ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-esi n'omume ndị ahịa na-eme ihe. Nke a bụ ngbanwe nke afọ ole na ole gara aga, mgbe ndị ọrụ jikọtara ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka mbọ ha na-ewu ụlọ. Ọtụtụ n'ime usoro ndị a kpuchiri n' mbipụta a sitere na amamihe ndị ọrụ mgbasa ozi ọha na eze nwere na mmetụta karịrị nke ahụ. "
Katie Ayoub, onye nchịkọta akụkọ na-ahụ maka njikwa, na-akọwa ihe a dị ka "mmepụta ọchịchị onye kwuo uche nke ihe ọhụrụ." “Ọwa mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu taa na-enyere ma kpalie ndị na-eto eto na-azụ ahịa ka ha gosipụta okike ha na mmasị ha nwere maka usoro nri na ihe ọṅụṅụ. Ihe na-atọ ụtọ na-eme na-eme n'ụlọ-dị ka charcuterie mbadamba, banana achịcha na akpa-fold quesadillas-na-enweta ọkụ ngwa ngwa na ebe a, na-enweta ume na-ewuli elu ịnụ ọkụ n'obi maka ọzọ iterations. Ndị isi nri, ndị na-esi nri achịcha na ndị na-agwakọta agwa nwere ike si ebe ahụ banye, na-eme ka omenaala mmapụta ọhụrụ ahụ, wee were ekpomeekpo ndị a wee mepụta ụzọ ọhụrụ na-atọ ụtọ na menus ha, "Ayoub kwuru.
Atọ ụtọ na NchNhr 10 kacha ewu ewu maka 2022:
1. Charcuterie-ọkwa na-esote: Mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye ume, bọọdụ charcuterie malitere ịmaliteghachi ha dị ka ihe kacha ekekọrịta.
2. Spanish Bocadillos: Bocadillo dị mfe nke Spain na-achọta ebe obibi na menus America.
3. Greek ọgbara ọhụrụ: N'ịchụpụ kitschy "Americanized" Greek nke kọwapụtara nri maka ọgbọ dị iche iche, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-edozi ọkpụkpọ ahụ na ezigbo ntụziaka na ihe oriri.
4. Tropical Flavors: Site na agba na-eme ka ọnọdụ uche, ihe ndị na-egbuke egbuke na echiche mgbapụ n'àgwàetiti, ihe ụtọ nke okpomọkụ na-enye mgbapụ na ọṅụ.
5. Nkasi obi Mexico: tweaks na-esote ọkwa nke nri kwesịrị ekwesị dị ka quesadillas, taquitos na birria na-enye njem dị ize ndụ ọbọp na nkasi obi homey.
6. Ihe oriri na-edozi ahụ nke osisi: Ahịhịa nke osisi na-amalite ime ebili mmiri na menus, dịka ndị na-ebubata ihe ọhụrụ na-ewebata ngwaahịa ndị ọzọ na ọrụ nri.
7. Nnu: Nnu na-enweta ekpomeekpo dị ka ma ihe na-eme ka ekpomeekpo na mmetụta dị elu n'onwe ya.
8. Achịcha Aka Savory: Echiche ndị ọkachamara na pies aka eweghachila igwe ọhụrụ nke gburugburu empanadas, achịcha anụ, achịcha achịcha, puffs na ndị ọzọ.
9. Unere: Menu mmepe nwere ike bee azụ n'ígwé nke ekwe omume dị na dị umeala n'obi banana: dialing elu ya okpomọkụ ụda, leaning n'ime ya Southern nkasi obi ma ọ bụ ịgagharị eclectic Mash-ups.
10. Cold-Coffee Drinks: Younger-eji na-akwọ ụgbọala ọhụrụ na oyi-kọfị ihe ọṅụṅụ, ụgbọala menu ọhụrụ na a wider n'usoro nke ngwa, si ọhụrụ na-abụghị alc kọfị tonics ka a sara mbara ojiji na cocktails.